February 5, 2019 - Written by Editor
Garoowe:-Waxaa magaalada Muqdisho ka furmay Banbax-howleed u dhaxeeya Wasaaradda Arrimaha Dastuurka,Guddiga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Guddiga.
Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka kaasoo socon doona muddo afar maalin ah.
“Shirkan waa mid muhiim u ah shaqooyinka seddexdan hay’ad, inta uu socdo shirkan seddex geesoodka ah waxaan uga arinsan doonnaa sidii aan howlaha soo socda u wajihi lahayn oo ay ugu horeeyso kulamada la-tashiyada dadweynaha Guddiyada iyo Wasaaradda ay u tagi doonaan Dowlad Goboledyada.
Guddiga Madaxabanaan wuxuu soo bandhigi doonoo howlihii uu qabtay iyo caqabadihii ka horyimid” ayuu yiri Gudoomiye Afrax.
Sidoo kale Gudoomiyaha Guddiga La-socodka Dib-u-eegista
iyo Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka, Gen Cabdi Xassan
Cawaale Qaybdiid oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa ka
hadlay guddi ahaan sida ay shirka u arkaan.
“Shirkan waa mid aan aad ugu faraxsanahay inaan ka qaybgalno waxaana rajeynayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan inaga oo diiradda saareyna sida aan u qabaneyno howlaha ina horyaalla, waxaa naga go’an inagoo gacmaha is heysana inaan wadasahqeyno si aan u wada guuleysano” ayuu yiri Gudoomiye Gen.Abdiqaybdiid.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta shirka wada qabsanay, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan heerkan soo gaarnay anagoo maanta ka arinsaneyna waxqabadkeena, waxaana heerkan ku soo gaarnay isku tanaasul iyo wadashqeyn dhexdeena ah.
Maanta meesha aan taagannahay waa inaan soo dhameeystirnay tobonkii cutub ee ugu adkaa Dastuurka, inta hartay ee arrimaha siyaasadda quseeya waxaan rajeyneynaa in dhowaan soo dhamaadaan, shirkan waa mid noo iftiiminaya wadada aan qaadeyno si aan sanadkan guul taariikhi ah u gaarno” ayuu yiri Wasiir Cabdi Xoosh.